‘स्वाइन फ्लु डरलाग्दो छैन’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘स्वाइन फ्लु डरलाग्दो छैन’
२०७१ फाल्गुन २३, शनिबार ०२:४१ गते
भरतपुर । बी एण्ड बी अस्पतालका डा. सुन्दरमणि दीक्षितका अनुसार स्वाइन फ्लु कुनै डरलाग्दो रोग हैन, यो केवल सुँगुर र बङ्गुरको रुघा हो । सुरूमा यो चराबाट फैलिएको थियो । नेपालमा खासै स्वाइन फ्लु फैलिएको छैन । उनी भन्छन् ‘अहिलेको रुघाखोकी सिजनल हो । स्वाइन फ्लुबाट नेपालमा एकजनाको मात्र मृत्यु भएको छ । उक्त मृत्यु हुने बिरामीलाई दमआदि दीर्घरोग पनि भएकाले स्वाइन फ्लुमात्र त्यो मृत्युको कारक होइन ।’
स्कुल, क्याम्पस, सार्वजनिक यातायात, सपिङ्ग मल, सिनेमा हल, अस्पताल तथा भीडभाडमा मात्र मास्क प्रयोग गनुपर्ने उनको राय छ । मास्क मात्रै स्वाइन फ्लुको उपचारक नभएको उनी बताउँछन् । भीडभाड बाहेकको स्थानमा मास्क लगाउनु हुँदैन । फ्रेस अक्सिजनको सेवनले स्वाइन फ्लुलाई निस्क्रिय गर्दछ तसर्थ हरियाली भएको ठाउँमा खुब अक्सिजन तान्ने र कार्बनडाइअक्साइड फ्याँक्ने गर्नुपर्दछ ।
उनको भनाइ छ– ‘हाम्रा झ्याल ढोका बलिया भए चोर पस्न पाउँदैन तसर्थ आफ्नो शरीर तन्दुरुस्त राखेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गरौँ । यसको लागि सागसब्जी, फलफूल, गेडागुडी, दूध, अण्डा, माछामासु, झोलिलो पदार्थ प्रशस्त खाने गरौँ । नियमित व्यायाम तथा सकारात्मक सोचको विकास गरौँ । फुर्सद मिलाएर अक्सिजन तान्न हरियाली स्थानमा जाने गरौँ ।’
उनको सुझाव छ– ‘धेरैजसो भाइरल रोगहरु एकपटक लागेपछि त्यसको रेसिस्टेन्स हुन्छ तसर्थ अरू देशमा भन्दा हाम्रो देशमा धुलो र धुँवा पचाउने शक्ति बढी छ त्यसैले यस्ता रोग पचाउने हाम्रो क्षमता गजबको छ । सकभर सबैले ह्याण्ड स्यानिटेजर झोल खल्तीमा राख्नु पर्दछ । कतै हातले छोएपछि, मुखमा हात राख्नुपूर्व त्यसको ७÷८ थोपाले हात सफा गर्नुपर्दछ । ह्याण्ड स्यानिटेजर प्रयोग गरेपछि साबुन, पानी, टावेल चाहिँदैन । सुर्र्ती खाने व्यक्ति सबैभन्दा जोखिमयुक्त हुन्छन् । सुर्र्तीलाई हातमा राखेर मुखभित्र राख्दा यो रोग सर्न निकै सजिलो हुन्छ । तसर्थ सुर्र्ती सेवन नगरौं ।’
डा. दीक्षित भन्छन्– ‘स्वाइन फ्लु हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि हुन सक्छ । सामान्य ज्वरो आएका बेला पनि स्वाइन भएको हुनसक्छ । तर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो भएको मानिसलाई छिट्टै निको हुन्छ । जब एकैपटक धेरै मानिसमा महामारीका रुपमा यो भाइरस फैलिन्छ तब हल्ला हुने गरेको छ । यसपटक पनि भएको त्यही हो । ज्वरो आएका धेरै मानिसलाई चेकअप गर्दा कसै न कसैमा यो हुन्छ नै । स्वाइन फ्लु संसारभर घुमिरहेको हुन्छ । कहिले फैलने रुपमा त कहिले नफैलने रुपमा यो आउँछ । अहिले अघि ठूलो रुपमा यो आएको छ । यसलाई आतंकमा रुपमा प्रचार गरिनु राम्रो कुरा होइन, यो कुनै आतंक पनि होइन । हामीले सतर्कता अपनाउन सक्यौँ भने स्वाइन फ्लुको संक्रमण रोक्न कठिन छैन ।’